Shimbiraha Xanaaqsan 2 ayaa imaan doona 30-ka July ilaa Android | Androidsis
Manuel Ramirez | | Shimbiraha cadhooday, Ciyaaraha Android, Noticias
Rovio wuu soo laabtay u rarka shimbiraha yaryar ee leh neura si ay iskaga tuuraan goobaha iyo caqabadaha inuu noloshiisa ku dhammeeyo sida ugu xiisaha badan uguna waalan ee jirta. Haa, jilayaasha caanka ah ee ka socda istuudiyahaan caanka ah ee ciyaarta fiidiyowga ah waxay mar kale sameyn doonaan sidii ay ku sameeyeen munaasabadaha isdaba jooga ah, si ay nolosheena u iftiimiyaan oo ay dib noogu soo celiyaan fiisigiska walxaha aad u qosolka badnaa maalintiisii waxaa soo gaadhay shimbiro careysan markii ugu horeysay Android.
Iyada oo 14 cinwaan tan iyo 2009, Rovio weli wuxuu ku jiraa seddex iyo tobankiisa inuu xitaa ka sii caan baxo shimbiraha yaryar ee waalan ee naga dhigay kuwa aad u qosol badan mahadnaqa timahooda iyo xiddigooda. Markan Rovio wuxuu noo keenayaa hooyada taxanaha oo dhan, sida ay iyaguba u shaaciyeen, waana cid kale oo aan ahayn Birds Angry 2 markay tahay 30 Luulyo. Markaa waxaad horeyba ugu dhejin kartaa biin taariikhdaas kaalandarkaaga ah si aad ugu diyaargarowdo soo dejinta bilaashka ah ee Shimbiraha Xanaaqsan 2, taas oo hubaal soo celin doonta wixii ahaa ereyga daawashada taxanaha ciyaarta fiidiyowga ah.
1 Shimbiraha careysan 2 ee Julaay 30
2 Iyo inta…
Shimbiraha careysan 2 ee Julaay 30
Marka xagaagan xitaa wuu ka kululaanayaa sida uu yahay, taas oo u dhowdahay inay cadaabta toos u gasho oo ay aragto sida shimbirahaas waalan ay ololka noogu soo dhacayaan Nasiib wanaagse xaaladdu sidaas ma aha, oo dhibcaha dhididka ayaa wejigayaga oo keliya hoos u dhici doona marka aannu xeebta ku ciyaarayno heerarka cusub iyo taxanaha Shimbiraha Xanaaqsan.
Waxa aynaan haysan ayaa ah faahfaahin badan oo kusaabsan waxa Shimbiraha Xanaaqsan 2 ay ula jeedaan dhanka ciyaarta ama wanaagga. Waxa kaliya ee aan hayno ayaa ah boodhadhka xayeysiiska iyo degel leh tirinta kuwa aan jecel nahay isla markaana necebnahay isla waqtigaas, maadaama ay na xusuusinayso inta ay le'eg tahay weli isku dayga Rovio cusub oo ah qaabka Shimbiraha Xanaaqsan 2.
Maxaa dhacaya haddii Boodhadhku wuxuu muujinayaa shimbiraha qaarkood oo xitaa ka sii xanaaqsan oo leh weji dagaal badan shimbirtaa yar ee weyn ee buuran ee badbaadisa dhabarka kuwa hore. Mana la yaabi doonno Shimbiraha Xanaaqsan 2 maxaa yeelay waxay hubaal la imaan doontaa wax badan oo isku mid ah oo sawiro ka wanaagsan, jilayaal badan iyo waxqabad la mid ah qalabka maanta aan ku haysanno aalado badan. In kasta oo aan ka tagi doonno albaabka xoogaa furitaan haddii ay dhacdo xoogaa la yaab leh kuwa aan jecel nahay in badan oo gurguurta ah.
Waad tuuri kartaa ciyaar ah Shimbiraha Xanaaqsan Dagaal, eeg ugu dambeeya ee Rovio iyo tan waxay u adeegtaa sidii suuxdinta si looga qaado rabitaanka ah in la isku dayo Shimbiraha cusub ee careysan kaas oo garaacaya albaabadeena bisha July 30.
Shimbiraha Xanaaqsan Dagaalku wuxuu noo qaadaa xujo sida Candy Crush Saga halkaas oo ay tahay inaan ka helno isku dhafnaan jilayaal kala duwan si aan ugu dhex marno heerarka. Ciyaar fiidiyoow ah oo si aad u wanaagsan loo ciyaari karo oo u adeegta in ay dhaafto saacadahaas bilaa camalka ah galabnimada inta aan ku jirno barkadda dabaasha.
Un ciyaar fiidiyow ah oo xiiso leh oo muujinaysa shaqada wanaagsan ee Rovio taasina waxay hordhac u tahay imaatinka xigga shimbiraha careysan. Waxaad ku haysataa bilaash Dukaanka Play-ka oo leh iibsiga caadiga ah ee barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Shimbiraha cadhooday » Rovio wuxuu ku dhawaaqay Shimbiraha Xanaaqsan 2 bisha Luulyo 30
Pushbullet for Android waxay heshaa taageero buuxda fariimaha SMS